Home4| ပြည်သူ့လွှတ်တော်
Oct 05, 2017/0
အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက မန်းဝင်းခိုင်သန်း (၃၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်များအား ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ
Oct 03, 2017/0
(၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ AIPA တက်ရောက်လာ သည့် ပါလီမန်ခေါင်းဆောင်များနှင့်ကိုယ်စားလှယ်များ နေပြည်တော်တစ်ဝိုက် ဆက်လက်လေ့လာ
(၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံဆိုင်ရာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ
(၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး
(၃၇) ကြိမ်မြောက်အာဆီယံပါလီမန်များအထွေထွေညီလာခံကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ် ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဒုတိယ ခေါင်းဆောင်၊ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် လူထုဆက်သွယ်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌMr. Charlie CHANDRUAND နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Oct 02, 2017/0
Oct 01, 2017/0
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်‌ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Fahri Hamzah အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်‌ စင်ကာပူပါလီမန် ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mdm. Halimah Yacob နှင့် တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်‌ IPU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Martin Chungong အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် WESTMINISTER FOUNDATION FOR DEMOCRACY (WFD) အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် အာရှဒေသပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းမွန်ရေး နည်းပညာပြန့်ပွားမှုအဖွဲ့မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Akio Kawakami အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အေး ဂျပန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် အာရှဒေသပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းမွန်ရေး နည်းပညာပြန့်ပွားမှုအဖွဲ့မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Akio Kawakami အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ကောငျးမွနျမာအောငျသင်ျဘောကုမ်ပဏီမှ MIC ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ စာခြုပျခြုပျ ဆိုခဲ့ပွီး တညျဆောကျရေးလုပျငနျးမြား စတငျအကောငျအထညျဖျောရနျ ဆောငျရှကျနခွေငျးအား ရပျဆိုငျးပေးပါရနျ အဆိုတငျသှငျးခွငျး
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိဧရာဝတီမြစ်နှင့်ငဝန်မြစ်အားကာရံထားသောရေကာတာများအား ယခုရောက်ရှိမည့် မိုးရာသီတွင် ပြည်သူများ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိအောင် ကြိုတင်အစီအမံများချမှတ်ဆောင်ရွက်ထားရှိရေးနှင့်လာမည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင်တာတမံများကြံ့ခိုင်မှုရှိရန်ဆောင်ရွက်ရေးအဆို
Jul 21, 2017/
ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်ရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပိုင်မြေကို ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ တည်ဆောက်ရန် ငှားရမ်းပေးခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းပေးပါရန် အဆိုတင်သွင်းခြင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့ (၁၆-၆-၂၀၁၇)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅) ရက်မြောက်နေ့ (၁၅-၆-၂၀၁၇)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄) ရက်မြောက်နေ့ (၁၄-၆-၂၀၁၇)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်မြောက်နေ့ (၁၃-၆-၂၀၁၇)